China igqunyiwe ipholiyesta zigqunyiwe ibhegi sasemini ibhegi mveliso kunye nabenzi | Ipikvalue
IXIAMEN PICVALUE CORP.
Ipikniki Mat ngengubo
Fashion ipholiyesta zepikiniki mat ngengubo quilted kunye wa ...
I-polyester yepikniki yengubo yokulala yengubo
Fashion ipholiyesta ibhegi sasemini kunye ibhokisi sasemini kunye indebe f ...
I-China fashion Polyester ibambe kabini ibhegi epholileyo
China fashion ipholiyesta iphakheji kabini ibhegi sasemini
Ihowuliseyili ipholiyesta China zigqunyiwe ibhegi sasemini bag
China fashion ipholiyesta zigqunyiwe ubhaka kupholile ro ...
China fashion ipholiyesta sasemini ibhegi kupholile plaid kunye d ...
China ubhaka okungangenwa ngamanzi
Ipholiyesta yebhegi yasemini yabantwana ebuyela esikolweni
Sasemini ibhegi sasemini ibhegi epholileyo nge handl ...
Ipholiyesta yesidlo sasemini ngePatheni yefashoni
Ipholiyesta yeLaser yeLunch Bag kunye noyilo lweFashoni
Ityhubhu epholileyo matt cationic ngelaphu kupholile kwi ...
I-polyester ye-canvas epholileyo yengxowa kunye nefashoni yefashoni
Ukunyusa ibhegi yetote enemibala emininzi
Ipholiyesta uboya kwipikniki ngengubo kunye manzi ...
Xa igqunyiwe eziphathekayo Ilaphu kupholile Bag Nge Adj ...
Iibhegi ezipholileyo ezisemgangathweni / ezi-6 zinokupholisa ibhegi / ingxande yesidlo sasemini esine-strouler strap e-China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sigxile kwiindawo ezininzi ezipholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo. Le ngxowa yesidlo sasemini zizinto ezintsha zeminyaka ye-2021.
Inombolo Inombolo: ML1098
Inkcazo: ibhegi epholileyo / i-6 inokupholisa ibhegi / ingxande yesidlo sasemini
Iinkcukacha Product: 300D ipholiyesta kunye PEVA / ngefoyile ye-aluminiyam lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana nokutya.
Umsebenzi: Gcina ukutya okanye iziselo zibanda okanye zishushu malunga neeyure eziyi-3-4. Ifanelekile ngaphandle kunye nokunyusa.
Izibuko: FOB Xiamen, China
Umzekelo: Unokukhetha kwiwebhusayithi yam okanye uyilo olwenziwe ngokwezifiso
Logo: logo ngentando KULUNGILE
MOQ: 2000pcs ngombala ngamnye
Ukupakisha 1pc / polybag
Isatifikethi i-BSCI, i-FDA, i-LFGB, i-REACH, i-CA65
Ixesha lesampula iintsuku ezisi-7
Ixesha Lead iintsuku ezingama-40 emva kokuba umyalelo waqinisekisa
Ixesha lokuhlawula i-TT 30% njengediphozithi kunye nokulingana ngokuchasene nekopi ye-BL okanye ye-LC xa ubona
Le bhegi ipholileyo / i-6 inokupholisa ibhegi / ingxande yesidlo sasemini kunye nomtya wegxalaba yinto yakudala kwaye iyathengisa kakhulu. Olu luyilo lwale ngxowa ipholileyo igqunyiwe ilulungele kakhulu ulwandle kunye nangaphandle. Elona gumbi liphambili lebhegi epholileyo egqunyiweyo imalunga ne-4L. Kwanele ukugcina ezimbiniibhokisi yesidlo saseminiokanye 1 ibhokisi yasemini kunye nezinye iziqhamo. Ingxowa ebandayo / i-6 inokupholisa ibhegi / uxande wesidlo sasemini ikwindawo yokungena manzi. Xa ukuvalwa uziphu kunye umtya shouler, ibhegi kupholile / 6 ingaba ibhegi kupholile / yoxande ibhegi sasemini kulula ukuqhuba. Ungaqinisekisa konke ukutya okanye isiselo esikhuselekileyo sikhuselekile kwaye sikhuselekile ekuhambeni. Izinto zangaphandle zobhaka opholileyo zii-600D / 300D ipholiyesta ye-oxford okanye ipholiyesta emibini yeethoni ene-PVC eyomeleleyo eqinileyo. Uninzi lwebhegi yangaphandle yenziwe ngeli laphu le-oxford. Umbala webhegi epholileyo / 6 unengxowa epholileyo / ibhegi yesidlo sasemini esixande inokuba yi-PEVA emhlophe, i-PEVA engwevu okanye ifoyile yealuminium ekhuselekileyo kunxibelelwano lokutya nokucoca ngokulula ngelaphu elimanzi. Mkhulu ngokwaneleyo ukuba ungakukhuphela ukutya uyokusebenza, isikolo njalo njalo. Ungabeka umkhenkce ngaphakathi kwengxowa ebandayo / i-6 inokupholisa ibhegi / ingxande yesidlo sasemini kunye neziselo, iziqhamo ukugcina ixesha elibandayo ixesha elide.
Sihlala sisebenzisa amagwebu angama-4-5mm ashinyeneyo e-EPE kule ngxowa ipholileyo phakathi kwangaphandle kunye nelayini ukugcina kushushu okanye kubanda. Ewe ungasebenzisa ejiyileyo ukufumana ixesha elingaphezulu.
Ubukhulu: 22 * 14 * 14cm
Inkcazo: Iibhegi ezipholileyo
Iinkcukacha zemveliso: Ipholiyesta ye-300D ene-PEVA / Aluminium foil lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana nokutya.
Umsebenzi: Gcina ukutya okanye iziselo ezibandayo okanye ezishushu malunga neeyure ezi-3-4. Ifanelekile ngaphandle kunye nokunyusa.
Izibuko: UFOB Xiamen, China
Ilogo: Logo esingabizi Kulungile
Ixesha lokukhokhela Kwiintsuku ezingama-40 emva kokuba i-odolo iqinisekisiwe
Ixesha lokuhlawula I-TT 30% njengedipozithi kunye nebhalansi ngokuchasene nekopi ye-BL okanye ye-LC xa ubona
Unyaka ngamnye, sinikezela malunga neepateni ezingama-50-100 ezintsha kubo bonke abathengi behlabathi. Uyilo ngentando nayo yamkelekile. Sinegumbi lesampulu ebandayo esomeleleyo kakhulu. Ndithumele umsebenzi wakho wobugcisa, iisampulu ziya kubuyela kuwe.
Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sigxile kwiindawo ezininzi ezipholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo. Le bhegi ithandwa kakhulu kwimarike yase-USA.
Singabantu inkampani yobungcali esebenza kwimveliso kunye nokuthengiswa kweengxowa zokugquma thermal, iingxowa zasemini, iingxowa zokuthatha ukutya, ibhegi yokuhambisa ukutya, i-casserole carrier.
Inkampani yethu ibambelela kwingqibelelo, umthengi kuqala, ukudumisa uluntu kuqala, umgaqo osisiseko wokuxhamla, kwaye ekugqibeleni kunye nabathengi ukufezekisa imeko yokuphumelela.